Ny Apple Watch ve no smartwatch tsara indrindra eny an-tsena? | Androidsis
Raha efa namaly ianao dia TSY afaka manohy mamaky. Raha ENY no navalinao koa. Lazainay foana fa hanandrana ireo loko, ary fantatsika ny filan'ny nofo izay avoakan'i Apple sy izay rehetra mamorona azy Amin'ity fotoana ity, miaraka amin'ny alàlan'ny iPhone os vaovao andao hanome ny hevitray momba ny andiany 4 an'ny Apple Watch.
Heverinao fa izany ny safidy tsara indrindra amin'ny famantaranandro marani-tsaina eny an-tsena? Amim-pahatsorana, ary amin'ny fiheverana ambonin'izay rehetra misy eo amin'ny fampisehoana sy ny vidiny, NO. Tsy te-hilaza mihitsy isika hoe tsy fitaovana tsara izany. Fa na dia azo anaovana akanjo tsara aza izy io, dia toa tsy ampy ny vidiny.
Misy safidy mora vidy kokoa izay manome izany ihany
Tsy hiditra amin'ny adihevitra momba ny overvaluation amin'ny zava-drehetra mamolavola izy ireo ary manamboatra avy any Cupertino. Tsy isika ihany koa no milaza izay tokony ho vidin'ny Apple Watch vaovao. Fa manadihady nefa tsy miditra lalina amin'ny tsena mahita safidy afaka miatrika azy isika avy aminao ka hatrany aminao amin'ny vidiny ambany dia ambany tokoa.
Rehefa vonona hividy smartwatch, amin'ny ankapobeny, dia mandray am-po maromaro isika lafiny manan-danja. Tokony aloha tiantsika ara-batanae, ary eo dia tsy maintsy ekena fa manangom-bola be i Apple. Tsy hoe mba hanatsarana azy io fotsiny, fa mba hahatonga antsika hitia azy, na inona na inona fitaovana manokana. Ny fivarotana exclusivity dia zavatra efa niasa ho anao taloha.
Fa raha manana zavatra mazava isika, ary tsy mizaha tavan'olona, ​​dia misy koa antony hafa. Ohatra, raha te hampiasa ny famataranandro isika mandritra ny fanazaran-tena amin'ny fanatanjahan-tena sasany dia zava-dehibe izany mahatohitra ahoana inona izany, azy Peso, raha manana ianao GPS mifangaro… Fa zavatra iray koa izay manan-danja hatrany am-piandohana, ary izay no mitohy, fizakantena, teboka malemy ao amin'ny Apple Watch.
Na dia mety tsara aza ny famantaranandro iray na tsara tarehy toy inona, dia tsy tokony havela izany ny baterinao dia tsy afaka maharitra mihoatra ny iray andro. Amin'ny dokambarotra dia amidiny anay ny fizakantenan'i "Hatramin'ny" 18 ora fampiasana. Tsy isalasalana fa zavatra tsy azo havaozina. Indrindra rehefa ny mpifaninana aminao tolotra toetra mampiavaka azy miaraka amin'ireo mizaka tena manakaiky ny iray volana manomboka amin'ny vidin'ny ambany hatramin'ny 10 heny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Apple Watch ve no smartwatch tsara indrindra eny an-tsena?
Gir dia hoy izy:
Salama Rafa, misaotra tamin'ny lahatsoratra ary tiako ho anao ny maneho hevitra amin'ny sasany amin'ireo famantaranandro izay hovidinao ho takalon'ny famantaranandroma paoma raha manana fotoana mety ianao
Valiny tamin'i Gir
Salama Gir, misaotra betsaka anao namaky anay. Ny lahatsoratra dia tsara raha mampitaha ny tolotra kalitao / vidiny tsara indrindra amin'ny smartwatches atolotry ny orinasa ankehitriny. Marihiko. Miarahaba !!
Ny fanesorana ny bateria sy ny vidiny dia mazava ho azy fa ny smartwatch tsara indrindra any
Ny calculatera tsara indrindra avy amin'ny Google Play Store